Dowladda Soomaaliya oo Kanada u Magacaawday Safiir Cusub.
October 18, 2020 | Posted by admin
Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya dalka Canada Xasan Daahir Dimbil ayaa maanta gaaray dalkaas si uu u bilaabo howlihiisa shaqo, waxaana soo dhaweeyay soomaalida ku nool Magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada.
Amb, Xasan Daahir Dimbil ee uu dhawaan Magacaabay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa uu noqonayaa safiirkii ugu horeeyay ee Canada sanadihii ugu dambeeyay. Soomaaliya ayaa markii ugu dambeysay safiir u dirtay dalka Canada sanadkii 2014, kaas oo lagu Magacaabi jiray Maxamed Cabdi (Gandi) ,kaas oo uu magacaabay Madaxweynihii xilligaas Xasan Sheekh Maxamuud.
Dimbil oo ka soo jeeda magaalada Boorama ayaa soo noqday wasiir ku xigeenka caafimaadka ee Somaliland halkaas oo uu ka waday olole ka dhan ah gudniinka Fircooniga ah.
Safiirka cusub ayaa ku sii jiri doona karantiil muddo 14 maalmood ah iyadoo la waafajinayo xeerarka COVID19 ee Kanada ka hor inta uusan bilaabin howshiisa.
Amb, Xasan Daahir Dimbil safiirka Cusub ee Soomaaliya u Magacaawday dalka Canada ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in uu soo dhaweyn diiran kala kulmo jaaliyadda Soomaalida-Canada ee Ottawa. Wuxuu intaas ku daray inuu rajeynayo inuu ka shaqeeyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Kanada iyo xiriirka dhaqaale.
Soomaaliya iyo Kanada malaha xiriir ganacsi oo adag. Sida laga soo xigtay dawladda Kanada, ganacsiga laba-geesoodka ah ee u dhexeeya labada ummadood ayaa bilaawday sanadkii 2018 wuxuu dhammaa in ka badan $ 9 milyan, Waxyaabihii ugu waaweynaa ee Kanada ay Soomaaliya u soo dhoofisay sanadkii 2017 waxay ahaayeen gawaari iyo qalab, makiinado, alaabooyin dhar ah, caagag iyo qalab gaar ah.
Waqtigaan la joogo, majiro xafiis dowladeed, waxaana Soomaalida ku nool Canada ka heli karaan adeegyada qunsuliyadda Guddiga Sare ee Kanada ee ku sugan magaalada Nairobi, ee dalka Kenya, waxaana Amb, Dimbil caddeeyay inuu rajeynayo inuu tan wax ka beddelo isagoo ka shaqeynaya dib u soo nooleynta howlihii diblomaasiyadeed ee Canada ay ku lahayd Soomaaliya.
Kanada markii ugu horreysay waxay xiriir diblomaasiyadeed la sameysay Soomaaliya sanadkii 1968, waana la hakiyay wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe 1991. Canada waxay dib u soo ceshatay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Soomaaliya sanadkii 2013 ka dib aasaaskii Dowladda Federaalka Soomaaliya.
« Ciidamo gaar ah oo la geeyay Jowhar.
Wasiir Bayle oo la Kulmay Safiirka iswiidhan. »